Technology Archives - Barataa Technologies - Giddu Gala barnootaa fi Odeeffannoo
Faayiloota torrent buufachuudhaaf jalqba irratti moosajota bittorrent qabaachuu barbaachisa. Moosaajileen kunniin faayiloota torrent buusuuf kan tajaajilaniidha. Intarneetii irraa moosajilee akkanaa heddu argachuu dandeessu. Isaan keessaa heddu jaalatamaa fi filatamaa kan tahe moosajii µtorrent jedhamuudha. Hidha armaan gadii kana irraa buufachuu dandeessu. Marsariitii torrent kamiinuu irra deemuudhaan faayila barbaaddu buufadhu. 2. Faayilli .tor isiniif bu’a 3. Faayila isiniif bu’a kana moosaajii µtorrent waliin…